संसद – Samaweshi Nepal.com
ज्योति तिवारी काठमाडौं १ फाल्गुन :- प्रदेश सरकारको गठन प्रक्रिया शुरु भइरहेको बेला दलहरुमा मन्त्री बन्नेको चर्चा पनि शुरु भएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ हुँदैछ । मुख्यमन्त्रीको.. पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ १६ माघ : - प्रदेश २ मा दुई सरकार बनाउने बहुमत पाएका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीमा मन्त्री र सभामुखका लागि दौडधुप तेज भएको छ । प्रदेश सभामा १ सय ७ सदस्य छन् ।ती मध्ये फोरमको २९.. पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं ,१० माघ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको ५६ सिटको लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । २४ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशका उच्च अदालत रहेका स्थानमा बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४.. पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ ४ माघ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी मुकाम तोकिएसँगै प्रदेश सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । अब प्रदेश प्रमुखहरुले राष्ट्रपतिसँग सपथ लिनेछन् भने अस्थायी मुकाममा उनीहरुको कार्यालय स्थापना हुनेछ.. पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ, माघ ३ गते । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा दुई रङका चार प्रकारका मतपत्रबाट मतदान हुने भएको छ । प्रदेशसभा सदस्यले एउटा रङको मतपत्रबाट मतदान गर्नेछन् भने स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपप्रमुख.. पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यक्रम र प्रक्रियाका बारेमा पाँच राजनीतिक दलका नेतालाई अवगत गराएको छ। आयोगद्वारा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.. पूरा पढ्नुहोस् »
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका रेशम चौधरीलाई यथासक्य चाँडो विजयीको प्रमाणपत्र दिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। पार्टी.. पूरा पढ्नुहोस् »
प्रदेश नं.२ को राजधानी जनकपुर,बन्द जनकपुर चुरोट कारखानामा मन्त्रालयदेखि आवाससम्म |
सरकारले प्रदेश नं.२ को राजधानी जनकपुरलाई बनाउने तयारी गेरसँगै आवस्यक पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु भएको छ । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, बारा, पर्सा र रौतहट गरी कुल ८ वटा जिल्लाको केन्द्र पर्ने भएकोले.. पूरा पढ्नुहोस् »
समानुपातिक सांसद कसरी छानिन्छ ?
समानुपातिक सांसद छान्नको लागि सर्वप्रथम देशभरको मतगणना सकिनुपर्छ र कुल सदर मत कति हो भनेर संख्या निकाल्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५२१ मतदाताले मत खसालेका छन् । जारी गणना.. पूरा पढ्नुहोस् »
कुन प्रदेशबाट कति जना समानुपातिक संसद आउछन् ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना सकिँनै लाग्दा समानुपातिक तर्फको मतगणना शुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १६५ जना निर्वाचित हुने क्रममा छन् भने प्रतिनिधिसभामा ११० जना समानुपातिक सांसद.. पूरा पढ्नुहोस् »